मेस्सीलाई पीएसजीको प्रस्ताव! - टि. एल. एन पोस्ट
Home खेलकुद मेस्सीलाई पीएसजीको प्रस्ताव!
मेस्सीलाई पीएसजीको प्रस्ताव!
फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी)ले क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनेल मेस्सीलाई क्लबमा अनुबन्ध गर्नै योजना अघि सारेको छ ।
पीएसजीले अर्जेन्टिनी फरवार्ड मेस्सीलाई तीन वर्षको लागि क्लबमा अनुबन्ध गर्नै प्रस्ताव अघि सारेको छ । बार्सिलोनामा मेस्सीको सम्झौता आगमी ३० जुनमा सकिदैछ । सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दा बार्सिलोना र मेस्सीबीच सहमति जुट्न नसकिरहेको मौकाको फाइदा उठाउँदै पीएसजीले आकर्षक प्रस्तावसहित मेस्सीलाई अनुबन्ध गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोन लापोर्टाले मेस्सीलाई क्लबमा राख्ने प्रयास गरिहेकोका छन् । अर्जेन्टिनी टेलिभिजन टिएनटी स्पोर्ट्सका अनुसार मेस्सीका लासग पीएसजीको प्रस्ताव ‘अपराजय’ छ र मेस्सीलाई पीएसजीले १० नम्वरको शर्ट प्रदान गरिनेछ । पीएसजीमा १० नम्वरको जर्सी हाल ब्राजिली फरवार्ड नेयमारले लगाइरहेका छन् ।
लुइस इनिरिकोको प्रशिक्षणमा मेस्सी र नेयमारले २०१४–१५ को सिजनमा ट्रेवल जितेका थिए । फ्रान्स फुटबलका अनुसार नेयमारले पनि मेस्सीलाई पार्स डेस प्रिन्सेसमा सामेल गराउन कडा मिहेनत गरिरहेका छन् । बार्सिलोनाका समर्थकहरु अझै पनि मेस्सी नोउ क्याम्पमा रहनेमा विश्वस्त छन् । बार्सिलोनामा मेस्सीको सम्झौता अवधि ८ साताभन्दा बढी छ ।
यस सिजन कोपा डेल रेको उपाधि जितेको बार्सिलोना स्पेनिस ला लिगाको उपाधि दौडमा रहेको छ । बार्सिलोना शीर्षस्थानको एट्लेटिको म्याड्रिडभन्दा २ अंकले पछि छ । यद्दपि बार्सिलोनाले एक खेल कम खेलेको छ । यो सिजनको अन्त्यपछि नै मेस्सीले आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
Previous articleसलमान खानको राधे घरमै बसेर हेर्न सकिने !
Next articleनिषेधाज्ञामा विवाहका सवारीलाई पास नचाहिने